टियु मैदानमा मिडियालाई ‘नो इन्ट्री’ | Suvadin !
‘मिडियालाई रिपोर्टिङमा गेट मै निषेध गरिनु खेदजनक कुरा हो। यदि त्यसो गरिएको हो भने त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ। मिडियाले प्रत्येक खेलाडीको रिभ्यु गर्नुपर्छ, सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष केलाउनु पर्छ। सोही कारण पनि मिडियालाई पूरै खेलमा छुट हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘मिडियालाई प्रवेश निषेध गरिनुकाे पछाडि आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयास पनि हुन सक्छ।’
सुपरलिग सञ्चालन भइरहेको टियु मैदानमा प्रवेश निषेध गरिएकाे थाहा पाएपछि गेटबाहिरैबाट रिपोर्टिङ गर्दै सञ्चारकर्मीहरू।
आईसीसी विश्व क्रिकेट च्याम्पियनसिप अन्तर्गत केन्यासँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा हुने खेलका लागि सुपरलिग आयोजना गर्ने भनी माघ ४ गते ५२ जना खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक गरियो। सोही ५२ जना खेलाडीलाई ए, बी, सी, डी गर्दै चार टिममा विभाजन गर्दै बिहीबारबाट कीर्तिपुर मैदानमा सुपरलिगका खेलहरू सुरू हुने जानकारी पनि त्यतिखेरै नै दिइएकाे थियाे।
राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि खेलाडी छनौट गर्नुपर्ने भएकाले मिडियाको चासो सुपरलिगमा हुनु सामान्य नै भयो। केन्यासँग खेल्ने नेपाली टिम कस्तो बन्ला? सुपरलिग प्रतियोगितामा खेलाडीहरूको प्रदर्शन कस्तो रहला? मैदानमा कुन खेलाडीले कस्तो प्रदर्शन देखाउलान्? लगायतबारे आम नेपाली क्रिकेट समर्थकलाई जानकारी गराउने माध्यम भनेको मिडिया मात्रै हाे।
मिडियालाई राज्यको चौथौं अङ्गका रुपमा परिभाषित गर्नु पछाडिको कारण पनि यही हो, कि मिडियाले घटनास्थलबाट जस्ताको तस्तै जानकारी दुरदराजका सम्बन्धित जनतासामु पुर्यायोस्। यि सिद्धान्तका कुरा भए। नेपाली मिडिया अझै पनि यस भूमिकामा अभ्यासरत छ।
नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा कलम चलाउन थालेको मैले झन्डै आधा दशक बित्न थाल्यो। यसको अधिकांश समय मेरो क्रिकेटिङ रिपोर्टिङमा बित्यो। धनगढीबाट खेलकुद पत्रकारिता सुरु गर्दा नै क्रिकेट रिपोर्टिङ मेरो पहिलो प्राथमिकता थियाे।
धनगढीलार्इ क्रिकेटकाे सहरका रूपमा चिनाइरहँदा यस अभियानका अभियन्ता सुवास शाहीले आफ्नो मन्तव्यमा नछुटाउने एउटा मुख्य कुरा हो, धनगढी क्रिकेट विकास र धनगढीलाई क्रिकेटको सहर बनाउनु पछाडि मिडियाले मुख्य भूमिका खेलेकाे छ। नेपालमै पहिलोपटक अक्सन सम्पन्न गरी नेपाली क्रिकेटमा क्रान्ति ल्याइसकेको धनगढीलाई यस अवस्थामा पुर्याउन मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोमा दुईमत छैन।
साेही सेराेफेराेबाट क्रिकेट रिपाेर्टिङ थालेकाे मैले पत्रकारितामा स्नातकोत्तर अध्ययन सँगसँगै शुभदिन डटकममा खेलकुद रिपोर्टिङकाे अभ्यास गर्दैछु। साेही क्रममा नेपाली क्रिकेटकाे महत्वपूर्ण रहेकाे सुपर लिग रिपोर्टिङ मेरो प्राथमिकता नपर्ने कुरो भएन।
बिहानै १० बजे अफिस पुगे। कोठाबाटै नै सोच बनाएर आएको थिए कि आज कीर्तिपुर गई सुपरलिगको राम्रो रिर्पोटिङ गर्नुपर्छ। अफिस पुगेको केहीछिनमा समाचारकक्षको मिटिङ भयो। आज कसले के-के गर्ने सबै सहकर्मीहरूले आ-आफ्ना योजना सुनाए। मेराे याेजना उही थियाे, कीर्तिपुर गर्इ सुपरलिगकाे विभिन्न पक्षबाट रिपाेर्टिङ गर्ने।
मिटिङ सकिँदा ११ बजिसकेको थियो। खेल सुरू भइसक्यो होला, गाडीमा जाँदा अबेर हुन्छ साेचेर मैले मोटरसाइकलमा जाने निधो गरेँ। माेटरसाइकलमा हुइँकिदै काठमाडाैंको धुलो, धुवाँ, ट्राफिक पार गर्दै कीर्तिपुर मैदान त पुगियो। एकछिन रनभुल्लमा परेँ। मैदानकाे गेटमा भाेटे ताल्चा लगाइएकाे रहेछ। गेटभित्र काम गरिरहेका एक जना दाइलाई बोलाए र गेट खोलिदिन आग्रह गरेँ। उनले भने, ‘सर भित्र पस्न मनाही गरिएको छ।’ म मिडियाबाट भएको हो भनी परिचय दिएपछि उनले भित्र पस्न दिए।
गेटबाट भित्र पसेपछि छेउमै मोटरसाइकल राख्न के भ्याएको थिएँ, एक जना अर्का व्यक्ति आएर भने, ‘सर मिडियालाई पनि भित्र पस्न मनाही गरिएको छ।’
मैले अचम्म मान्दै भनेँ, ‘यत्रो राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणको लागि खेल भइरहेको छ। आम क्रिकेट समर्थकहरू खेलमा के भइरहेको छ भनि पलपलको जानकारी पाउन अातुर छन्। तर, मिडियालाई भित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ रे!’
उनी साधारण कामदार थिए, उनलाई मेरो कुरामा चासो हुने कुरै भएन। उनलाई जे अह्राएको छ त्यही गर्दै थिए। उनीसँग बहस गर्नु उचित थिएन। मैले कुराे के हाे त भनी बुझ्न नेपाली टिमका टेक्निकल एनालिस्ट रमन शिवाकोटीलाई फोन लगाएँ। उनले पनि त्यही जवाफ फर्काए, ‘मिडियालाई भित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।’
मैले किन भनी जवाफ मागेँ। ‘आईसीसीले त्यस्तै गर्न भनेको छ’ भन्दै उनले अपुष्ट जवाफ फर्काए।
उनको जवाफ म सन्तुष्ट भइनँ। केही पर मैदानकाे तारजालीभित्र नेपाल क्रिकेट संघका कार्यसञ्चालक अधिकृत छुम्बी लामा रहेकाे देखेपछि जवाफ खाेज्न उनीतिरै लागेँ। प्रश्न उही थियाे, ‘सुपरलिगमा मिडियाको प्रवेशमा किन रोक लगाइयो?’
लामाले हाँस्दै भने, ‘अहिले नेपाली क्रिकेटको अवस्थाबारे तपाईंलाई जानकारी नै छ, हाम्रो कमिटीले नै मिडियालाई प्रवेश नदिने निर्णय गरेको हो।’
मैले सोधेँ, ‘कुन कमिटीले मिडियालाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको?’ कुन कमिटीबारे उनी अाफैं अलमलमा थिए। अलमलकै बीच उनले भने, ‘यहाँ खेल्नेजति सबै खेलाडी, प्रशिक्षक हामीले।’
उनीबाट पनि चित्तबुझ्दो जवाफ अाएन।
‘सुपरलिगकाे नै रिपाेर्टिङ गर्न नपाइने भएपछि मिडियालाई प्रवेशमा रोक लगाइएको भन्ने नै समाचार बनाउनु पर्याे त्यसाे भए त,’ मैले भनेँ, ‘तपार्इंकाे यही ‘बाइट’ राख्ने हाेला नि!’
उनकाे अनुहारको रङ फेरियो। जंगिदै भने, ‘मेराे नाम काेट गर्ने हैन।’ उनकाे साथमै भएका नेपाली टिमका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सुझाउँदै थिए, ‘बाहिर गेटमै मिडियालाई प्रवेश निषेध गरिएको छ भनेर लेखेर राख्दिनु न।’
मिडिया प्रवेशमा रोक लगाइएको जवाफ पाइसकेपछि मैदानमा मेराे औचित्य भएन। रिपाेर्टिङ गर्न गएकाे म रित्ताे हात फर्कने भएँ। फर्केर गेटमै पुग्न के अाँटेकाे थिए, त्यहाँ अन्य मिडियाका साथीहरू भित्र प्रवेशमा राेक लगाएपछि के गर्ने भन्ने अन्याैलमा रहेछन्। सुपरलिगकाे भिडियो छायांकन गर्न आएका मिडियाकर्मीहरू मिडियालार्इ प्रवेश निषेध गरिँदै गेटमा ताला लगाएकाे भिडियाे खिच्न थाले भने कतिपय मिडियाकर्मीहरू आयोजक पदाधिकारीहरूलाई मिडिया निषेधबारे बुझ्न फोनमा व्यस्त थिए। तर, मजस्तै उनीहरूलाई अन्यौल थियो, आयोजक को हो भनेर? कतिपय टेक्निकल एनालिस्ट रमन शिवाकाेटीलार्इ फाेन गर्याैं भन्दैथिए भने कति छुम्बी लामा त कति प्रशिक्षक जगत टमटालार्इ फाेन गराैं भन्दै थिए।
गेटमा मिडियाकर्मीहरू जम्मा भएकाे देखेपछि टुपलुक्क अाइपुगे पुनः उही कार्यसञ्चालन अधिकृत लामा। मिडियाकाे दबाब थाेग्न नसकेकाले हाेला, यसपटक भने उनी निकै नरम देखिन्थे र मैदान बाहिरैबाटै फुटेज खिच्न मिल्ने बताए। एकछिन अगाडि मिडियालार्इ निषेध गरिएकाे बताउने उनकाे बाेली एकछिनमै फेरियाे।
म भने उनको कुराबाट अझै सन्तुष्ट थिएनँ। अनलाइन पत्रकार भएका नाताले मलाई फुटेजकाे भन्दा पनि खेलाडीहरूकाे मैदानमा कस्ताे प्रदर्शन रहन्छ भन्ने जान्नु थियाे। मलाई त कुन खेलाडीले मैदानमा कस्तो प्रदर्शन रह्यो, कुनै नयाँ सम्भावना भएकाे खेलाडी पाे देखिन्छ कि ब्रेकिङ मलार्इ चाहिएकाे थियाे। अनलाइन पत्रकारितामा ब्रेकिङ दिन सकिएन भने त्याे सूचना छिनभरमै बासी भएर जान्छ।
रिपोर्टिङ नै नहुने भएपछि कार्यालय फर्किनुको विकल्प थिएन। तै पनि खेलकुद पत्रकार मञ्चका एक जना वरिष्ठ पदाधिकारीलाई फोन गरेँ। आम नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूको बेजोड चासो रहने सुपरलिगजस्ता प्रतियोगिताको रिपोर्टिङमा निषेध लगाइएको बारे जिज्ञासा राख्दा, नाम नखुलाउने सर्तमा उनले भने, ‘मिडियालाई रिपोर्टिङमा गेट मै निषेध गरिनु खेदजनक कुरा हो। यदि त्यसो गरिएको हो भने त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ।’
‘मिडियाले प्रत्येक खेलाडीको रिभ्यु गर्नुपर्छ, सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष केलाउनु पर्छ। सोही कारण पनि मिडियालाई पूरै खेलमा छुट हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘मिडियालाई प्रवेश निषेध गरिनुकाे पछाडि आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयास पनि हुन सक्छ।’
उनको कुरामा जोड दिँदै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा रहेको मिडियालाई जनताको चासोका विषयमा समाचार संकलनमा रोक लगाउनु विल्कुल गलत प्रवृत्ति हो, अझै खेलकुदमा भने धेरैको चासो हुने गर्छ, यसले एकातिर संविधानमा नै ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्छ भने अर्कातिर जनतालाई सूचनाको हकबाट पनि बञ्चित गराउँदछ। जनचासोका विषयमा मिडियालाई रोक लगाइनुहुन्न र महासंघले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ।’
लामो समयदेखि नेपालमा क्रिकेट रिपोर्टिङ गरिरहेका एक जना वरिष्ठ खेल पत्रकारका अनुसार नेपालमा यसभन्दा अगाडि मिडियालार्इ खेलमा निषेध गरिएकाे थिएन। उनका अनुसार विश्वका ठूला प्रतियोगिताहरुमा निश्चित समय मिडियाका लागि छुट्याइएको हुन्छ। नेपालमा त्यो अभ्यासको प्रचलन भइनसकेको अवस्थामा मिडियालाई गेटमै प्रवेश निषेध गर्नु अापत्तिजनक भएको उनी बताउँछन्।
त्यस्तै, निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल पनि मिडियाको प्रवेश निषेधको विषयमा अचम्मित देखिए। उनले भने, ‘नेपाली क्रिकेटको विकासमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण छ। खेल क्षेत्र र मिडियाको भूमिका त अन्याेन्याश्रित हुनुपर्छ।’ मिडियालाई प्रवेशमै रोक लगाउनेहरूले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक गरेको उनले बताए।
सुपरलिगलार्इ लिएर एक पक्षले खेलाडी छनाैटमा मनाेमानी भएकाे, अाफूमा भएका कमीकमजाेरी छाेप्न पनि मिडियाकाे प्रवेश सहज नबनाइएकाे अाराेप लगाउँदै अाएका छन्। सुपरलिगमा छनाैट गरिने खेलाडीहरूलार्इ केही निश्चित व्यक्तिहरूले छनाैट गर्नुले देशैभरिका खेलाडीलार्इ अन्याय परेकाे याथार्थ हाे। सुपरलिगमा मिडियाकाे प्रवेश निषेधले यिनै कुराहरूलार्इ थप पुष्टि गर्न मद्दत मिलेकाे छ। अर्कातर्फ खेलकाे प्रत्यक्ष अपडेटमा पनि राेकले अाम क्रिकेट प्रेमीहरूले खेलाडीहरूले कस्ताे खेलिरहेका छन् भन्ने कुराकाे पनि जानकारी पाएका छैनन्। त्यसैले सुपरलिगकाे अायाेजकले बेलैमा याे कुरामा सचेत हुनु अावश्यक छ।